नमोबुद्धः विदेशबाट आएका सबैमा कोरोना परिक्षण भएन, प्रयोगशालाले किट दिएन – Radio Roshi
काभ्रे जिल्लामा रहेको स्थानिय तहहरुले यतिबेला विभिन्न मुलुकबाट आएका नागरिकहरुको द्रुत परिक्षण (आर.डि.टि.) गरिरहेका छन् । गत चैत्र ३० गतेदेखि सुरु भएको परिक्षणमा विभिन्न पालिकाले नतिजा सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने मण्डनदेउपुर नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकाका एक÷एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । र उनिहरुको अहिले धुलिखेल अस्पतालमा थप परिक्षण भईरहेको छ ।
तर काभ्रेकै नमोबुद्ध नगरपालिकाले भने आफ्नो पालिका भित्र विभिन्न मुलुकबाट आएका २५ जना मध्ये १३ जनाको कोरोना परिक्षण भएको र बाँकि रहेका अन्यको किट अभावका कारण परिक्षण गर्न नसकेको बताएको छ ।
नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक राजु वोगटीका अनुसार हिजो (मंगलबार) सम्म १३ जनाको आर.डि.टि. परिक्षण गरिएको र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । “बाँकिको परिक्षण गर्नका निमित्त किट छैन, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा किट माग्न जाँदा किट छ तर दिन मिल्दैन भन्दै फर्काए” उनले बताए ।
“यस्तो समयमा बाहिरी मुलुकबाट आएका सबै को परिक्षण गर्न जरुरी छ, भोली संक्रमण फैलियो भने को जिम्मावारी? किट उपलब्ध गराईदिनुहोस् भन्दा प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. अरुणा झाले किट दिन्न भन्नुभयो र म फर्किए” वोगटीले बताए ।
स्वास्थ्य कार्यलय काभ्रेका प्रमुख डा.नरेन्द्र कुमार झाका अनुसार नमोबुद्ध नगरपालिकालाई २० वटा आर.डि.टि. किट उपलब्ध गराईएको थियो । उनका अनुसार चैत्र महिना भित्र बाहिरी मुलुकबाट आएकाहरुलाई परिक्षण गर्नका लागि किट पठाईएको हो ।
“हामीले बारम्बार भनेका हौ, चैत्र महिना भित्र आएकालाई मात्र पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस्, चैत्र भन्दा अगाडि नै आएकालाई होम क्वारेन्टाईनमा राख्ने र लक्षण देखा परेमा आर.डि.टि. परिक्षण गरिने हो” उनले भने, “उहाँहरुलाई धेरै पटक सम्झाएका हौँ तर बुझ्नु भएनछ, बाँकि बसेको ७ वटा किट कोरोनाले यदि महामारीकै रुप लियो भने तत्काल प्रयोग गर्नका लागि राख्नुहोस् भनेको हो ।”
धुलिखेल अस्पतालका प्रवक्ता डा.सुमन ताम्राकारले पनि स्थानिय तहमा भईरहेको आर.डि.टि. परिक्षणमा पोजेटिभ देखिएमा मात्रै स्वाव परिक्षण हुने, अन्यथा स्वाव परिक्षण नहुने बताए । “पावरको भरमा र विदेशबाट आएका जो कोहिलाई पनि स्वाव परिक्षण गर्न मिल्दैन, पहिले आर.डि.टि. परिक्षण गर्ने हो, त्यस्मा कोरोना पोजेटिभ भयो भने मात्रै स्वाव परिक्षण गरीने हो” डा.ताम्राकारले बताए ।
तर नमोबुद्ध नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक वोगटीले भने २५ जनाकै र्यापिड टेस्ट हुनुपर्ने बताए । यदि चैत्र महिना अगाडि आएकाहरुलाई कोरोना रहेछ भने पुरै नगरमा संक्रमण फैलने उनको तर्क छ । सबैको परिक्षण भएमा नगरबासिमा त्रासको वातावरण सिर्जना नहुने उनको भनाई छ ।